फार्मासिष्ट वा फार्मेसी टेक्निशियन कसरी बन्ने - चेकआउट | सेप्टेम्बर 2021
औषधि जानकारी, स्वास्थ्य शिक्षा घरपालुवा जनावर चेकआउट स्वास्थ्य शिक्षा, घरपालुवा जनावर मनोरञ्जन प्रेस औषधि जानकारी समाचार, कल्याण कम्पनी, समाचार स्वास्थ्य समुदाय, कल्याण स्वास्थ्य शिक्षा, कल्याण औषधि बनाम मित्र खेलहरु समुदाय, कम्पनी
मुख्य >> चेकआउट >> फार्मेसी क्षेत्रमा कसरी पुग्ने
फार्मेसी क्षेत्रमा कसरी पुग्ने
फार्मासिष्टहरू र फार्मेसी टेक्नीशियनहरू तिनीहरूको समुदायको महत्त्वपूर्ण सदस्यहरू हुन्। तिनीहरू तपाईंलाई मद्दत गर्दछ जब तपाईं बिरामी महसुस गर्नुहुन्छ र पर्दाको आवश्यकता पर्दछ। तिनिहरु अस्पतालहरु, घर स्वास्थ्य देखभाल, र सहायता सुविधाहरु लाई सहयोग गर्न को लागी काम गर्दछ तपाईको औषधि सही उपचार, खुराक, र अवधि छ तपाईलाई राम्रो महसुस गर्न को लागी। यसको शीर्षमा, ती दम, उच्च रक्तचाप, वा मधुमेह जस्ता दीर्घकालीन अवस्थाहरू प्रबन्ध गर्न मद्दत गर्न तपाईंको स्वास्थ्य सेवा टोलीको रूपमा काम गर्छन्।
तपाईंको स्थानीय फार्मेसीमा समुदाय फार्मासिष्ट वा फार्मेसी टेक्नीशियन सबैभन्दा देखिने भूमिका हो। तर फार्मेसीमा अन्य थुप्रै अवसरहरू छन government सरकारी एजेन्सीको लागि काम गर्ने, औषधी कम्पनीहरूसँग अनुसन्धान गरेर वा उच्च शिक्षामा सिकाउने।
फार्मासिष्ट र फार्मेसी टेक्नीशियन भूमिकाहरू राम्रो कमाई सम्भावनाको साथ स्थिर रोजगारहरू हुन्। यो एक फार्मासिष्ट हुन धेरै राम्रो समय हो! भन्छ Sandra Leal , Pharm.D।, को प्रमुख कार्यकारी अधिकारी SymphonyRx । जनसंख्या युग र औषधीको प्रयोग बढ्दै जाँदा, फार्मासिष्टहरूलाई बिरामीहरुलाई राम्रो परिणाम प्राप्त गर्न मद्दत गर्न निरन्तर आवश्यकता पर्दछ। यदि तपाइँ विज्ञान, स्वास्थ्य सेवा, वा ग्राहक सेवा मा रुचि छ, यो सिर्फ तपाइँको लागि सही फिल्ड हुन सक्छ!
फार्मेसी प्राविधिकहरूले के गर्छन्?
फार्मेसी टेक्निसियनहरू मुख्य रूपमा खुद्रा फार्मेसी र अस्पतालहरूमा काम गर्छन्। तिनीहरू फार्मासिष्टहरूसँग काम गर्ने ग्राहकका लागि नुस्खा तयार पार्न, र समस्याहरूको समाधान गर्दै छन्। यस अनुसार अमेरिकी श्रम तथ्या of्क ब्यूरो (BLS), यसले समावेश गर्न सक्छ:
प्रिस्क्रिप्सन गणना, खन्याई, मिक्सिंग, वा चित्रण गर्दै
आपूर्ति र औषधिको फार्मसी सूची ट्र्याक गर्दै
प्रिस्क्रिप्शन र बीमा दावीहरूको लागि भुक्तानी प्रक्रिया गर्दै
कम्प्युटर प्रणालीमा ग्राहक जानकारी प्रविष्ट गर्दै
फोन कलहरूको उत्तर दिँदै
फार्मासिष्टलाई प्रश्नहरू निर्देशन गर्दै
फार्मासिष्टहरूले फार्मेसी टेक्नीशियनहरूको सुपरिवेक्षण गर्दछन्, र अन्तिम लिनु अघि प्रिस्क्रिप्शन समीक्षा गर्छन्। फार्मेसी टेक्निशियनहरूको माग आउँदो १० बर्षमा बढ्ने अपेक्षा छ किनकि फार्मेसी टेक्निशियनहरूले फार्मेसी सञ्चालनमा ठूलो भूमिका खेल्छन्। एक फार्मेसी टेक्निशियनको औसत वार्षिक तलब $ 32,700 छ, अनुसार BLS ।
सम्बन्धित: एक फार्मेसी टेक्नीशियन के गर्छ?
फार्मासिष्टहरूले के गर्छन्?
फार्मासिष्टहरूले काउन्टरको पछाडि मात्र काम गर्दैनन्। वास्तबमा, Percent 55 प्रतिशत फार्मासिष्टले अन्य सेटि inहरूमा काम गर्दछ। फार्मासिष्टहरूले बिभिन्न भूमिकाहरू भर्न सक्दछन् जहाँ उनीहरूले काम गर्छन् र क्यारियर मार्गमा तिनीहरू पछ्याउँछन्। यस अनुसार BLS , केहि सामान्य कर्तव्यहरु:
चिकित्सकहरूसँग विवरणहरू प्रमाणीकरण गर्दै
ड्रग-ड्रग अन्तर्क्रिया वा औषधि सर्त अन्तर्क्रियाको लागि जाँच गर्दै
बिरामीहरूलाई कसरी उपचार वा सम्भावित साइड इफेक्टहरू लिने बारे सिकाउने
शरीरमा औषधीले कसरी काम गर्दछ र बुझ्ने तरीकाले यसलाई लिने बेलाबाट बच्न
फ्लू शट र अन्य खोपहरू दिँदै
बिरामीहरुलाई उनीहरूको स्वास्थ्यको बारेमा सल्लाह दिदै
बीमा कम्पनीहरूसँग काम गर्दै
अन्य स्वास्थ्यसेवा चिकित्सकहरूलाई औषधि उपचारको बारेमा सिकाउँदै
नयाँ औषधिहरूको खोजी गर्दै वा नयाँ तरिकाले अवस्थित औषधिहरू लागू गर्दै
त्यहाँ फार्मासिष्टका बिभिन्न प्रकार छन्: सामुदायिक फार्मासिष्टहरू, क्लिनिकल फार्मासिष्टहरू, परामर्शदाता फार्मासिस्टहरू, र औषधि उद्योग फार्मासिष्टहरू। डा। लेलका अनुसार तपाईले सूचना, घर संचार, कानुनी अभ्यास, विष नियन्त्रण, र पशु चिकित्सा फार्मेसीमा पनि काम गर्न सक्नुहुनेछ। विशेषताहरु लगभग अन्तहीन छन्।
भूमिका र उत्तरदायित्वहरू क्यारियर ट्र्याकमा आधारित हुन्छन्। यो नोट गर्न महत्त्वपूर्ण छ, जब तपाइँको विशेषता छनौट गर्दा, परम्परागत समुदाय फार्मासिस्ट भूमिकाको माग घट्दै छ, किनकि यी रोजगार बजारहरू संतृप्त हुँदैछन्। को BLS परियोजनाहरु अस्पताल र क्लिनिकल सेटिंग्समा केहि भविष्यको वृद्धि, तर फार्मासिष्टहरूको समग्र मांग समतल छ, विशेष गरी जब अन्य स्वास्थ्य सेवाहरूको लागि बढ्दो मागको तुलनामा। एक फार्मासिस्टको औसत वार्षिक तलब $ 126,120 छ, अनुसार BLS ।
तिमीलाई कुन डिग्री चाहिन्छ?
फार्मेसी टेक्निशियन बन्नको लागि , कहिलेकाँही तपाईलाई चाहिने हाई स्कूल डिप्लोमा र काममा प्रशिक्षण हुन्छ। व्यावसायिक स्कूल वा सामुदायिक कलेजहरूमा कार्यक्रमहरू छन् जुन एक बर्ष भित्र प्रमाणपत्र प्रदान गर्दछन्। फार्मेसी टेक्नीशियनहरूको लागि आवश्यकता राज्य अनुसार फरक हुन्छ। केहि राज्यहरु लाई फार्मेसी टेक्नीशियनहरु फार्मेसी टेक्निशियन प्रमाणन बोर्डको साथ एक प्रमाणपत्र परीक्षा पास गर्न आवश्यक छ ( PTCB ) वा राष्ट्रिय स्वास्थ्य सेवा संघ ( एनएचए )। धेरै राज्यहरूमा पनि राज्यको दर्ता आवश्यकता छ, प्रमाणिकरणको अतिरिक्त वा ठाउँमा। रेजिष्ट्रेसन प्रक्रियामा फिंगरप्रिन्टिaर पृष्ठभूमि जाँच समावेश हुन सक्छ। यदि तपाईं फार्मेसी टेक्निशियन बन्न रुचि राख्नुहुन्छ भने, निश्चित गर्नुहोस् तपाईंको विशिष्ट राज्यको आवश्यकताहरू बारे परामर्श लिन।
फार्मासिष्ट बन्नको लागि, तपाईंसँग फार्मेसीको डाक्टर हुनुपर्दछ ( Pharm.D। ) डिग्री र इजाजत पत्र प्राप्त गर्न दुई राज्य परीक्षा उत्तीर्ण। बिभिन्न फार्मेसी स्कूलहरुका बिभिन्न आवश्यकताहरु छन्। प्राय: दुई वर्षको स्नातक अध्ययन वा स्नातक डिग्रीको आवश्यक पर्छ, यद्यपि केही विद्यालयहरूले हाईस्कूल स्नातकहरूको लागि छ-वर्षे कार्यक्रम प्रस्ताव गर्छन्। तपाईंले फार्मेसी कलेज भर्ना जाँच (पीसीएटी) मा स्कूलको प्रवेश आवश्यकताहरू पूरा गर्न र फार्मेसी स्कूलमा तपाईंको आवेदनको अंशको रूपमा अन्तर्वार्ता पूरा गर्न न्यूनतम प्रतिशतको स्कोर गर्न आवश्यक पर्दछ। पाठ्यक्रममा रसायनशास्त्र, फार्माकोलजी, र नैतिकताका कक्षाहरू समावेश छन्। धेरै विद्यालयहरूलाई नामांकन अघि विज्ञान र गणितको पृष्ठभूमि चाहिन्छ।
अधिकतर कार्यक्रमहरूले कार्य सेटिंग्समा इन्टर्नशीपमा आवश्यक घण्टाको सेट संख्या समावेश गर्दछ। खोपहरू प्रशासित गर्न, वा कुनै खास क्षेत्रमा ज्ञानको उन्नत स्तर प्रदर्शन गर्न, तपाईंले प्रमाणपत्र परीक्षा पास गर्न आवश्यक पर्दछ। यदि तपाईं फार्मेसी स्कूल पछाडि क्लिनिकल भूमिकामा जान चाहानुहुन्छ भने तपाईले एक वा दुई बर्षे रेसिडेन्सी विशेष क्षेत्रमा गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै संक्रामक रोग वा जीरियाट्रिक्स। तपाईं पनि एक फेलोशिप पूरा गर्न सक्नुहुन्छ वा अभ्यासको खास विशेषता क्षेत्रमा बोर्ड-प्रमाणित बन्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईं अनुसन्धानको भूमिकामा जान चाहानुहुन्छ भने तपाईले स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूरा गर्न आवश्यक हुन सक्दछ विज्ञानको मास्टरको लागि वा फार्मास्युटिकल विज्ञानमा डक्टरेट डिग्री, जस्तै फार्मास्युटिक्स वा फार्माकोकिनेटिक्स। केहि संस्थाहरू वा रोजगार भूमिकामा, यी एकसाथ मिलेर जान्छन्।
के तपाईं फार्मेसी डिग्री अनलाइन कमाउन सक्नुहुन्छ?
त्यहाँ अनलाइन सहयोगी कार्यक्रम र फार्मेसी स्कूलहरू छन्, तर प्राय: व्यक्तिगत प्रयोगशालाको अनुभव आवश्यक पर्दछ। कार्यक्रम छनौट गर्नु अघि, अमेरिकन एसोसिएशन अफ कालेज अफ फार्मेसी (AACP) र अमेरिकन फार्मासिष्ट एसोसिएसन (APHA) सिफारिस गर्नुहोस् प्रोग्रामलाई राम्ररी अनुसन्धान गर्दै, र यी प्रश्नहरू सोध्दै:
के म सानो, ठूलो, नयाँ, वा स्थापित कार्यक्रम रुचाउँछु?
के मेरो राज्य र क्षेत्रीय प्राथमिकताहरू छन् मेरो परिवार र समर्थन नेटवर्कको नजिकको कारण?
कार्यक्रमको स्नातक र एट्रिशन (ड्रपआउट) दरहरू के हुन्?
कार्यक्रमको पहिलो पटक नेप्लेक्स (उत्तर अमेरिकी फार्मासिस्ट इजाजतपत्र परीक्षा) पास दरहरू के हो?
कार्यक्रमको मान्यता मान्यता के हो?
क्षेत्रका अन्य कार्यक्रमहरूसँग तुलना गर्दा जब यो शिक्षण उचित छ?
ट्यूशन मूल्यहरू कार्यक्रमबाट फरक हुन सक्दछ, त्यसैले यो तपाइँको लागि किफायती छ कि कार्यक्रम पाउन महत्वपूर्ण छ।
के फार्मेसी तपाईंको लागि सही छ?
यदि तपाईं निश्चित हुनुहुन्न भने, यो अगाडि अनुसन्धान गर्न लायक छ।
काम गर्ने वा तपाईंको स्थानीय फार्मेसीमा स्वैच्छिक प्रयास गर्नुहोस् । यसले तपाईंलाई फार्मासिष्ट वा फार्मेसी टेक्नीशियनको भूमिका र दिन प्रति दिन जिम्मेदारिहरूको अन्तर्दृष्टि दिन्छ।
फार्मेसी स्कूलमा आवेदन गर्नु अघि फार्मेसी टेक्नीशियनको रूपमा काम गर्नुहोस्। डाक्टर लेल भन्छन कि विभिन्न अभ्यासमा व्यक्तिसँग कुरा गर्नु राम्रो हुन्छ - जस्तै शिक्षाविज्ञान, स्वास्थ्य प्रणाली फार्मेसी, प्रबन्धित हेरचाह, सामुदायिक फार्मेसी, र अनुसन्धान - यस क्षेत्रमा उपलब्ध सबै अवसरहरू हेर्न। तपाईं चार वर्षको कार्यक्रममा लगानी नगरी खुद्रा वातावरण तपाईंको लागि सही छ भनेर जान्न सक्नुहुन्छ। वा, तपाईं एक इंटर्नशिप वा गर्मी कार्यक्रम प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।
तपाईको स्थानीय फार्मासिष्ट वा फार्मेसी टेक्निशियनहरूसँग कुरा गर्नुहोस्। उनीहरू कसरी क्षेत्र मा रुचि भयो र कुन शैक्षिक पृष्ठभूमि थियो सोध्नुहोस्। उनीहरूलाई के मनपर्दछ - वा मन नपराउने their तिनीहरूको भूमिकाको बारेमा फेला पार्नुहोस्।
तपाईंको स्थानीय अस्पतालमा फार्मासिष्ट वा फार्मेसी टेकको छाया दिनुहोस्। यदि तपाईं एक विशेषता भूमिकामा रुचि राख्नुहुन्छ भने, यसले एक दिनको लागि कसैलाई पछ्याउन मद्दत गर्दछ, यदि स्वास्थ्य प्रणालीले यसलाई अनुमति दिनेछ।
आफैलाई सोध्नुहोस्, मेरो प्रेरणा के हो? यो तलब छ? वा किनभने तपाईंको आमा बुबा तपाईं चाहनुहुन्छ? वा के तपाई मानिसहरूलाई प्रेम गर्ने, र नयाँ विज्ञान र गणित सिक्ने प्रेमबाट प्रेरित हुनुहुन्छ? फार्मेसी कडा मेहनत हुन सक्छ, त्यसैले यो सही कारणहरूको लागि क्षेत्र मा जान महत्त्वपूर्ण छ।
के हुन्छ यदि तपाइँ एन्टिबायोटिक धेरै चाँडै लिनुहुन्छ
एक स्थानीय फार्मेसी स्कूल सम्पर्क गर्नुहोस् उनीहरूले प्रदान गरेको फार्मेसी शिक्षाको बारेमा बढी सिक्न।
लिनुहोस् रमाईलो क्विज कुन प्रकारको फार्मेसी तपाईंको लागि सही हुन सक्छ भनेर हेर्नको लागि । त्यसोभए उपलब्ध बिभिन्न विशेषताहरूको बारेमा सिक्नुहोस्।
व्यस्त तालिका? फिट र स्वस्थ रहनको लागि यी १ quick द्रुत सल्लाहहरू प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्
तपाइँ एक uti बाट छुटकारा पाउन के गर्न सक्नुहुन्छ
एक खमीर संक्रमण को उपचार को लागी घरेलु उपचार
तपाइँको आहार मा आयोडीन प्राप्त गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो तरीका हो
3 मिनेट मा उच्च रक्तचाप कसरी निको पार्ने
कसरी toenail कवक छिटो खाली गर्न को लागी
wellbutrin र औषधि परीक्षण र सकारात्मक परिणाम